Hypertonus na nwa - gịnị ka ọ bụ, gịnị ka ị ga - eme? Ọrịa elu nke akwara na ụmụ amụrụ ọhụrụ - ihe ịrịba ama
Hypertonus na nwa - ihe nile na-akpata na ọgwụgwọ kacha mma
N'ime ọnwa mbụ nke ndụ, ụmụ nwere ike ịnweta ọrịa dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, ọbara mgbali elu na nwata. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ dị mkpụmkpụ, ọ gaghị adị njọ, ma ọ bụrụ na nrụgide ahụ dịgidere ruo ogologo oge, ọ dị mkpa ịkpọtụrụ dọkịta ma malite ọgwụgwọ ka ọ ghara ime ka ọnọdụ ahụ ka njọ.
Kedu ihe bụ hypertonus a?
A ghọtara okwu a dị ka mmebi nke ụbụrụ ụbụrụ, nke a na-egosiputa na mgbochi ahụ. Nsogbu yiri nke ahụ na-egosi nhụsianya nke ụfọdụ nsogbu nke usoro ụjọ ahụ. O kwesiri iburu n'uche na ụba nke ụbụrụ na-amụba n'ime nwatakịrị bụ ọdịiche dị iche, nke a na-ahụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụmụ ọhụrụ nile, na ihe niile n'ihi na nwa ahụ dị ogologo na-etopụta n'afọ ime n'afọ. Hypertonus nwere ike zuru oke, kpuchie ma ogwe aka na ụkwụ ma ọ bụ gbatị naanị n'akụkụ elu ma ọ bụ nke ukwu.
Enwere ule ụfọdụ na-enyere dọkịta aka ịchọpụta nsogbu ahụ. A p ur u iji ha mee ihe maka ichikota ulo:
Ịtụgharị uche. Mgbe nwa ahụ nọ n'ọnọdụ ziri ezi, ọ na-anwa ime ihe. Ọ bụrụ na ụbụrụ nwatakịrị ahụ adịghị adị, mgbe ahụ ike a ga - apụ mgbe ọ ruru afọ 2.
Mmetụta nke mgbanwe. Tinye nwatakiri ahụ n'azụ ya ma tinye aka ya n'obi ya. Mgbe nke a gasịrị, ọ dị mkpa ka ị na-ahụ akụkụ aka: elu ga-ehulata, na ndị dị ala - ịhapụ ya. Ọ bụrụ na isi na-agbanye ya n'aka nri, akụkụ aka nke dị n'akụkụ a kwesịrị ịgbatị, na nke ọzọ - bụrụ nke na-adaba. Mgbe ị na-esote n'aka ekpe, ihe niile bụ ụzọ ọzọ gburugburu. Mgbe ihe niile dị mma, ihe a na-apụ apụ mgbe ọnwa atọ gasịrị.
Ike iji olu. Tinye nwa ahụ n'afọ ya, ọ ghaghị ịkwanye ụkwụ ya n'otu oge ahụ. Mgbe ị dina n'azụ, enwere ntụrụndụ nke ogwe aka na ụkwụ. Ike a ga - apụ mgbe ọnwa atọ gasịrị.
A na-etinye nwa ahụ n'aka. Mgbe ọ nọ n'ọnọdụ a, a ghaghị inwe mkpaka nke aka na ntụrụndụ nke ụkwụ. N'okpuru ọnọdụ nkịtị, isi na azụ ga-agbatị n'otu akara.
Hypertonus - kpatara
E nwere ọtụtụ ihe nwere ike ịkpalite esemokwu n'ime ụmụaka:
Ọnụnọ nke ọrịa na-ejikọta na endocrine na usoro obi na-eme n'oge ime.
Ọrịa elu nke akwara na nwatakịrị nwere ike kpatara kpatara ọrịa chromosomal na ọrịa ndị na-arịa ọrịa.
A na-enweta nhụjuanya mgbe a mụrụ, ma ọ bụ gosi hypoxia intrauterine .
Usoro mmepe na mmebi nke ụbụrụ na ụbụrụ.
Ịchọta nwanyị dị ime na ọnọdụ nrụgide n'oge mbụ na ọnọdụ ọjọọ nke ọnọdụ obibi.
Ọrịa siri ike n'oge mbụ ma ọ bụ nke ikpeazụ, yana ịṅụ sịga na ịṅụ mmanya n'oge ime ime, nke nwere ike ibute ịṅụbiga mmanya ókè.
Ogwu mgbali elu na nwatakiri nwere ike ibute ọrịa na-efe efe, dịka ọmụmaatụ, maningitis na encephalitis, na ọbụna mmerụ ahụ.
Hypertonus na ụmụaka n'okpuru otu afọ
A na-ahụkarị nrịanrịa niile dị na mọzụlụ na ọnwa mbụ nke ndụ. Ọ dị mkpa ịghọta na ọ bụrụ na nwatakịrị dị nká karịa otu ọnwa, mgbe ọ nọ n'afọ, na-agbanye isi ya n'akụkụ dịgasị iche iche, na-anwa iji ụkwụ ya na-azọ ụkwụ, nke a abụghị ụdị ọgwụgwọ, kama ọ bụ ihe àmà nke mmepe ya. Ọ bụghị ihe mgbaàmà nke ọbara mgbali na ọchịchọ nwatakịrị na-echekarị ya isi. Ọ bụrụ na ndị nne na nna na-elekọta nwa ha nke ọma, na-agbaso ihe niile edere aha ha, mgbe ahụ, ụbụrụ ụbụrụ a na-amụba na nwa ga-agafe, na ọkara nke nsogbu na ọtụtụ nsogbu kpamkpam. Ma ọ bụghị ya, gwa onye dọkịta mgbe niile.
Hypertonus na ụmụaka mgbe afọ 1 gasịrị
Ọ bụrụ na ndị nne na nna emeghị ihe iji wepụ nrịanrịa ahụ nke nwa ahụ, ọnọdụ ahụ ga-aka njọ. Mgbe otu afọ nwatakịrị ga-amalite ịnwa ije na nke a, ọ ga-enwe nsogbu. N'ihe dị ka afọ atọ, a na-egosipụta ntụgharị dị iche iche n'ije ije na nkwụsị nke nkà aka mma nke aka. Mmetụta ọbara mgbatị na ụmụaka site na afọ ise nwere ike ịkpata ọtụtụ nsogbu, dịka ọmụmaatụ, ịdabere mmepe, na ọnọdụ ndị siri ike nwere ike ịchọta na nkwarụ.
Kedu otu esi achọpụta nwatakịrị na-eme ka hypertonicity?
Ndị nne na nna kwesịrị nlezianya nyochaa ọnọdụ nke nwatakịrị ahụ iji chọpụta ihe mgbaàmà nke obi mgbawa na oge, dịka ha nwere ike ịbụ ihe na-egosi ọrịa ọrịa na-adịghị mma.
Nwatakịrị ahụ na-ehi ụra ma na-adaghị ụra, mgbe ọ nọ n'azụ ya, ọ na-agbanye ogwe aka ya na ụkwụ ya.
Mgbe ọ na-ebe ákwá, nwa ahụ na-atụghachi isi ya ma na-agbasi ike. Na mgbakwunye, e nwere jitter na agba.
N'ịkọwa ihe mgbaàmà nke ọbara mgbali n'ime nwatakịrị, ọ bara uru ikwu banyere nchịkọta ugboro ugboro na mmeghachi ihe na-egbu mgbu dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, ìhè na ụda.
Ruo ọnwa, nwa ahụ na- ejide isi ya ugbu a, nke a abụghị ihe ịrịba ama nke mmepe ngwa ngwa, ma ihe mgbaàmà nke nrụrụ ahụ, nke na-eme ka ọ gbadaa olu ma laghachi.
Hypertonus nke ụkwụ na nwa
Ọ bụrụ na ụkwụ nwa ahụ na-ada mbà mgbe ọ bụla, mgbe ị gbalịrị igbatu, ị na-enwe obi mgbawa na nwa na-ebe ákwá, mgbe ahụ, nke a bụ ihe ọjọọ. A na-egosipụta Hypertonus nke ụkwụ n'ime nwa ahụ n'eziokwu na n'oge a na-azụ nwa ahụ n'ụkwụ, ọ naghị adabere n'ụkwụ, kama na sọks. Ọ bụrụ na enweghị ihe ọ bụla, ọnọdụ ahụ ga-emewanyewanye nke a ga - emetụta ọnụego nke mmepe ọrụ. Ụmụaka na-amalite ịmalite ma na-aga ije n'ikpeazụ. N'ịnọ n'ihu ọbara mgbali ụkwụ na-atụgharị ụkwụ na ndị na-emegharị ihe, dịka ha ga-eme ka obi mgbawa dị elu.
Hypertonus nke aka nwa
Nsogbu dị n'aka na-egosi n'eziokwu na nwa ahụ na-agbanye ha n'obi, mgbe a na-atụgharịkwa ngwụsị, a ga-emegide nkwụsị. N'ịkọwa ihe mgbaàmà nke ọbara mgbali na ụmụ amụrụ ọhụrụ, ọ bara uru ịkọ otu ihe mgbaàmà - aka na-agbanye aka mgbe niile. N'ọtụtụ ọnọdụ, a na-ahụ ihe mgbaàmà dị otú ahụ na hypertonia physiological, ya bụ, nsogbu ga-agabiga. Ọ bụrụ na esemokwu ahụ dịgidere ruo ogologo oge. Mgbe ahụ, ịchọrọ ịhụ dọkịta ịmalite ịgwọ ọrịa.
Ọrịa elu nke ire na nwa
N'ọnọdụ ụfọdụ, enwere obi mgbawa nke ahụ ike: ire, egbugbere ọnụ, ọnụ na ọdịdị ihu. Iji chọpụta ma a na-akpọlite ​​ire nwa ma ọ bụ na ọ bụghị, rịọ ya ka o mepee ọnụ ya ma ọ bụrụ na e nwere nsogbu, ire ga-alaghachi ma ghọọ "ugwu" ma ọ bụ, gbanwee, gbadaa n'ihu. Ọ bụrụ na erughị ala na ọnụ na egbugbere ọnụ, ha na-anọchi anya, ọ ga-esikwa ike ịmalite ọnụ. Mgbe a na-etolite ụda olu dị n'elu, a ga-emeghe ọnụ ma meghee salivation.
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na nwatakịrị m nwere ụba dị elu?
Ọ bụrụ na achọpụtara ihe mgbaàmà ọ bụla na-adịghị mma, ọ dị mkpa ịkpọtụrụ dọkịta iji chọpụta nyocha ahụ kpọmkwem. Ndị nne na nna kwesịrị iji ọrụ nke normalizing arụ ọrụ nke usoro ụjọ ahụ. Ọgwụgwọ ọbara mgbali na ụmụ amụrụ ọhụrụ dị mfe ma nwee ike ịgụnye ịhịa aka n'ahụ , ntụrụndụ, ịsa ahụ dị mma, aromatherapy na physiotherapy. Ọ bụ naanị dọkịta na-ekpebi ma ọ bụ dị mma maka usoro nwa ahụ.
Kedu ka esi ewepụ ọbara mgbali elu na nwatakịrị?
Maka mkpali nke ọrụ moto na normalization nke ọrụ muscle, a na-atụ aro ka ị jiri mgbatị ahụ. Ọzụzụ dị mkpa dị mkpa na ime ihe omume pụrụ ịbụ ọbụna ọtụtụ ugboro n'ụbọchị. Ememe ntụrụndụ ekwesịghị ịkpata obi erughị ala na nwa ahụ. Ọ bụrụ na ịchọta ụda dị n'ime nwatakịrị, mgbe ahụ, mmemme dị otú ahụ ga - enyere aka:
Tinye nwatakịrị ahụ n'azụ gị wee malite site na ịmegharị ahụ ịhịa aka n'ahụ. Mgbe nke a na-emeghị nke ọma n'enweghị mberede na-emegharị aka, wee na-amanye ha, were mkpịsị aka were nwa ahụ.
Ọ bụrụ na nwatakịrị na-arịwanye elu, mgbe ahụ ọnọdụ nke ọmarịcha embrayo ga-enyere aka. Maka nke a, ụkwụ na ụmụ ọhụụ na-ehulata ma na-adagide ahụ. A na-atụ aro ka ịmegharị mmega ahụ ọzọ na ịkụ aka nke aka.
A na-eme nwatakịrị ahụ n'ọnọdụ ziri ezi ka ụkwụ ya metụ ala ahụ, ha ga-edina ala n'elu ala ahụ dum. Nduzi ya ka ụkwụ gị mee ihe ntụgharị.
Debe nwa nwa na bọọlụ, nke ekwesịghị ịdị oke. Gbanye ya na ntụziaka dị iche iche, jide ya site n'aka na ụkwụ.
Ịhịa aka na ọbara mgbali elu nke akwara na nwa
E nwere ụdị ịhịa aka dị iche iche, nke bụ isi bụ iji mee ka obi dị jụụ na iwepu spasm. Ọ dị mkpa ịhọrọ ụzọ dị nro nke na-echebara afọ na ọdịdị ọdịdị nke nwatakịrị ahụ n'uche. Ịhịa aka site na ọbara mgbali n'ime nwatakịrị ka mma inyefe onye ọkachamara, ma ọ bụrụ na enweghi ike ime ya, ị nwere ike ime ya n'onwe gị, ma mgbe ị jụsịrị dọkịta. Usoro ahụ kwesịrị ịgụnye 10-15 sessions na, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, megharịa ya otu ọnwa. Ị nwere ike iji aka gị mee ụdị mmegharị ahụ:
Aka mkpịsị aka na ogwe aka. Mgbanwe ga-adị ka ihe dị ka mgbe ị na-etinye aka na glove.
Na-esi ike, na-aga site na nkwonkwo aka na nkwụ. Ọ dị mkpa na nke a ka ị na-egwu mpaghara nke ụbụrụ ahụ.
Na-agbachi ụkwụ, ụkwụ na ụkwụ, ma jiri nwayọ na-arụ ọrụ na mpaghara ikpere ikpere ụkwụ, ukwu na ime n'akwara.
Ghọta na mmeghari okirikiri nke ala na elu, azụ na afọ. Ọ dị mkpa ka ịme nke a mgbe ị gwụsịrị.
Banyere ụkwụ, a ghaghị ịkpụgharị ụkwụ ahụ n'ikiri ụkwụ ruo mkpịsị ụkwụ ya. Uzo ozo na-abia ihe mmadu di-asatọ na ukwu, na-amalite site na mkpịsị aka, na-agafe n'etiti etiti na ikiri ụkwụ.
Yersiniosis na ụmụ
Iberibe na nwata - ọgwụgwọ
Mumps na ụmụ nwoke
Othhalmic ụta na ụmụaka
Nsogbu dị elu n'ime nwata - ihe ị ga-eme?
Ụmụaka ahụike na ụmụaka
Scabies na ụmụaka
Protargol ke adenoids
Kedu ọgwụ mgbochi a na-eme n'ụlọ ọgwụ?
Oge ịgba ọgwụ mgbochi maka ụmụ ọhụrụ
Ụmụ na-atụ nsị
Phenylketonuria - Gini bu oria a, gini mere o ji eme, na otu esi emeso ihe ozo?
Sirop nke licorice ka ụmụaka
Fenibut maka ụmụaka
Ụta maka ụbịa nke 2016 maka ụmụ agbọghọ
Biography nke Till Lindemann
Esi esi gbasaa akpụkpọ ụkwụ n'ụlọ - ụzọ kacha dịrị nchebe ma dị irè
Ntị na-ada Normox
Sugar Brew - ụzọ kachasị mma isi kwadebe ihe ndabere maka mmanya na-aba n'anya
Foto site n'aka Brad Pitt na Selena Gomez, mere ka mwakpo nke ekworo na Angelina Jolie wakporo
Kedu ngwa ngwa iji kpochaa igwe onyonyo?
Kedu ka esi ele obere anya karịa afọ ha?
Obere kichin-ime ụlọ
Nnukwu Wall Wall New York City
Nkwụ mmanụ - emerụ ahụ ike na ọgụgụ
Nri ọka na ụbịa site na pests na ọrịa ndị
Ntak emi uwem emi ẹkedọhọde ke ufọk uwem ke obio emi ẹkedude ke obio?
Ajụjụ dị mfe dị mfe 25 na sayensị enwebeghị ike ịza
Daba na akọrọ maka nkịta
Kylie Jenner buru ụzọ pụta n'ụwa mgbe a mụsịrị nwa ya nwanyị
Kedu ka esi kpoo nti nke pug?
Agba akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ